Isibonelo Esiphelele eshibhile Off Road Electric Self Ukulinganisela Scooter - Jomo Technology Co., Ltd
Isibonelo Esiphelele eshibhile Off Road Electric Self Ukulinganisela Scooter
Ububanzi ingenye ukucabangela ebalulekile kuyilapho ukukhetha imoto kagesi sikagesi. Self sekulinganisa isikutaizimoto ongaphakeme-speed, nazo zonke okuthengiswayo engaqhathaniswa ezifanayo. Yasungulwa ngu Koowheel, le Hoverboard K7 is nelungelo lobunikazi njengoba "ezimbili-wheel, self-kulinganisa imoto yangasese.". Noma ngabe ukugudla, wokugijima, noma beya, Hoverboard K7 uhlale e ukuzinza. I Hoverboard K7 Self-Ukulinganisela Scooter 8.5inch hoverboard amasondo omkhulu off komgwaqo, ngakho ungase futhi adlale ngalo kanye phezu phezulu naphansi komgwaqo. Enye Model K5 TWO ISONDO NOKUZITHIBA sekulinganisa SCOOTER nge-bluetooth elimbaxambili futhi izibani smart led. Umehluko owodwa ukuthi uzothola phakathi Segway futhi ambalwa self sekulinganisa ibhodi ukungabi khona handlebars, ngaphezu kwalokho, u-50% isisindo ohlangothini ngalunye ukuyigcina auto ibhalansi phambi vula nangemva ithuba off, oqine kakhulu, kulula futhi iphephile ukugibela, ikakhulukazi Wabasaqalayo. Khona lapha at Koowheel, uzothola omunye okuhlaziya engcono mayelana Scooters self-kulinganisa.
I Koowheel Hoverboard ingenye phakathi ephelele "Made in China" self ngokulingene Scooters. Kulinganiselwa ukuthi kule isikuta kufanele final engengaphansi kwengu-10, okusho ukuthi zizoba zimbi kakhulu imali yakho noma kunini uma ukhetha le self ngokulingene Scooters. Ezimbili isondo okusha self ngokulingene isikuta kagesi . Lokhu isikuta futhi sibonisa uhlangothi njengoba sinjalo uhlelo uqobo ekhona Scooters ezahlukene. Ngaphandle kwalokho, kusobala ukuthi isikuta has a platform ukuma namasondo ezimbili ladonsa kwezinye Scooters ehola. I 2 Wheel Ukulinganisela Scooter izibani ka- igqamile, futhi uzokwazi ukusebenzisa kulo mshini kalula kanye. Impilo yebhethri ende ne ephapheme Double bluetooth izipikha uhlelo kuletha inhlanganisela ephelele ngesikhathi ebusuku kubonakala oncomekayo ukuze babe uhambo kwesokudla, LED izibani elikhazimulayo emgwaqeni, ukulalela umculo nokuba ephelele ibhalansi isipiliyoni. Ngaphandle kwalokho, kukhona isibambo phakathi, ngakho kulula kakhulu ukuletha.
Lolu hlobo lwe- isikuta self-kulinganisa , ngokungafani abanye, kwadingeka amandla adonsela phansi 8pcs izinzwa, hhayi njalo 4pcs abicah Gros, ebucayi futhi uzinzile, isilinganiso engaphelele aphansi. Sesiyazi besele bafake lobunikazi futhi okungezona sokwephulwa kwe nge Chic, solowheel noma razor, ubuchwepheshe ohluke ngokuphelele futhi patent ethu. Uma oluhlaza ngesandla, khetha 'saqala' level. I amathayi umthwalo eqinile futhi esindayo, futhi lezi Ungasingatha ibhekane yiluphi uhlobo isimo sezwe. Amasondo futhi ukusiza nabagibeli ukuze uthole break ephelele lapho kuhanjwa. Riding kuyajabulisa-inqobo nje phansi kulula.
isikhathi Iposi: Oct-05-2017